कम्युनिष्टलाई भन्दा लगानीकर्ताले कांग्रेसलाई पत्याउँछन्ः पूर्वअर्थमन्त्री महत (भिडियोसहित) – Clickmandu
कम्युनिष्टलाई भन्दा लगानीकर्ताले कांग्रेसलाई पत्याउँछन्ः पूर्वअर्थमन्त्री महत (भिडियोसहित)
क्लिकमान्डु २०७५ चैत २० गते १४:५८ मा प्रकाशित
सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन केहीदिन अघि मात्रै सम्पन्न भएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन पूर्णरुपमा सफल भएको दाबी गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने लगानी सम्मेल गरेर सरकारले लगानी भित्र्याउन नसकेको दाबी गर्छन् । सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाहरु देखाएर लगानी सम्मेलन सफल भयो भन्दै झुटो प्रचारप्रसार गरिरहेको महतको दाबी छ । सरकार काममूखी भन्दा पनि प्रचारमूखी भएकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उनको ठम्याई छ । लगानी सम्मेलन र सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि नारायण पौडेलले पूर्वअर्थमन्त्री महतसँग गरेको कुराकानीः
हालैमात्र सरकारले लगानी सम्मेलन गर्यो । सम्मेलबाट के कस्ता उपलब्धि हासिल भए ?
सरकारले लगानी सम्मेलन गर्यो । लगानी सम्मेलन कहिलेकाहीँ गर्दाखेरी राम्रै हुन्छ । तर, उहाँहरुले जुन प्रकारले प्रचार गर्नुभयो । त्यो आवश्यक थिएन । प्रचार गरेर मात्रै लगानी बढ्ने होइन । सम्मेलन र भाषण गरेर मात्रै पनि लगानी बढ्दैन ।
के गर्दा चाहीँ लगानी आउँछ त ?
लगानी आउनका लागि त देशमा साँच्चिकै लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ । शान्ति सुरक्षा सुदृढ हुनुपर्यो । पूर्वाधारको कमी हुनु भएन । प्रशासन, नीति र कानूनहरु लगानी प्रवद्र्धन गर्ने खालका हुनुपर्यो । प्रशासन बिजनेश फ्रेण्डली हुुपर्यो । समयमा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता भएको हुनुपर्यो । सुशासन र पूर्वाधारको सुधार गरेपछि मात्रै लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।
ठूलो सम्मेलन गर्दा मान्छेहरु आउँछन् । कुराकानी गर्छन् । देशको स्थिति के छ भने जानकारी दिने उद्देश्यले चाहीँ लगानी सम्मेलन उपयुक्त हुन्छ । लगानी सम्मेलन हुनेवित्तिकै ह्वार्रै लगानी आइहाल्छ भन्ने हुँदैन । तर, सरकारले लगानी सम्मेलन भयो । अब धुमधाम लगानी हुन्छ । देश नयाँ युगमा प्रवेस गर्यो भनेर जु प्रकारले प्रचारबाजी गरिरहेको छ, त्यो सरासर झुट हो ।
सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर लगानी ल्याउन सकेन भन्नु खोज्नुभएको हो ?
लगानी आयो भन्ने कुरा परिणाम छर्लङ्गै भएको छ । परिणाम राम्रो त निस्किएन । पहिल्यै लगानी सम्झौता भएर काम भइरहेका ठूल्ठूला उद्योगहरुलाई लगानी सम्मेलनमा नयाँ लगानी भएको भन्दै प्रचार गरियो । निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको फाइनान्सियल क्लोजरलाई पनि विदेशी लगानी भनियो । फेरि अरुण तेस्रोको फाइनान्सियल क्लोजरमा नेपाली बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।
माथिल्लो त्रिशूल जलविद्युत अयोजना ६/७ वर्षदेखि कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो आयोजनामा कोरियनहरुको लगानी छ । यसलाई पनि अहिलेको लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भयो भन्दै प्रचार गरिएको छ । त्यस्तै, कालीगण्डकी गर्ज भन्ने आयोजना पनि पहिले नै सम्झौता भइसकेको हो । चौधरी ग्रुपले ४/५ वटा प्रोजेक्टहरु अघि बढायो । ती पनि पहिलेदेखि नै प्रस्तावित थिए । त्यसकारण लगानी सम्मेलनले नै नयाँ चहलपहल ल्यायो भन्ने कुरा झुटो प्रचारबाजी मात्रै हो ।
त्यसोभए तपाईंको बिचारमा लगानी सम्मेलन पूर्णरुपमा असफल भयो ?
एउटा खुसीको कुरो चाहीँ के छ भने बामपन्थीको वर्तमान सरकार पनि विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न तत्पर देखिएको छ । उत्साहित देखियो । यो चाहीँ सकरात्मक हो । किनभने देशमा लगानीको वातावरण बनाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ भन्ने नीति नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको हो । कांग्रेसको यो नीतिलाई कम्युनिष्टहरुले त्यसबेला तीब्र आलोचना गर्थे । तर, अहिले नै उनीहरुले लगानी भित्र्याउन सम्मेलन नै गर्न थालेका छन् ।
सरकारका एक वर्ष आर्थिक, सामाजिक र राजनीकित कुनैपनि दृष्टिकोणले राम्रो छैन । सरकारमा बस्नेहरु काममूखी होइन, प्रचरमूखी बढी हुनुहुन्छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु पनि गहन अध्ययन गरेर होइन । नयाँ युगमा प्रवेश भयो भन्ने हल्लाखोरी मात्रै छन् । हल्ला र भाषण गरेपछि सम्मृद्धि आइहाल्छ भन्ने उहाँहरुको सोचाई देखियो ।
यस्तै सकरात्मक सन्देशले देशमा लगानीको वातावरण बन्ने होइन र ?
हल्लाखल्ला गरेर मात्रै लगानी आउँदैन । लगानी ल्याउन देशकै अवस्था सुधार गर्नुपर्छ । अहिले देशको अवस्था सुधार भएको छैन ।
तपाईंको मतलब बहुमत पाएको स्थिर सरकारले पनि लगानीको वातावरण बनाउन सकेन ?
स्थिर सरकार भएर मात्रै लगानीको वातावरण बन्ने होइन । मूख्य त सरकार कस्तो छ, सरकारका क्रियाकलापहरु कस्ता छन् भन्ने कुराले लगानीको वातावरण निर्धारण गर्छ । ५ वर्षे स्थिर प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी छ । तर, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र हेर्नुस् त छिनछिनमै फेरिएका छन् । प्रशासनिक स्थिरता त भएन । प्रशासनमा पनि गतिला र सही मान्छेहरु आउनुपर्यो । जुन अहिले देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा अत्याधिक राजनीतिकरण भएको छ । संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकामा सहेत राजनीकि आधारमा नियुक्ति भयो भन्ने ब्यापक चर्चा छ । यसले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छ ?
अर्थतन्त्रको ऐना मानिने नेप्से इन्डेक्स लगातार घटेर ११०० को अंकमा आइपुगेको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ भने भ्रष्टाचार सूचकले देखाएको छ । डुइङ बिजनेश रिपोर्टले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण झन बिग्रिएको छ भन्ने देखाएको छ ।
कांग्रेसले सरकार चलाउँदा पनि त यी समस्या थिए नि होइन र ?
कम्युनिष्टको सरकार भएकाले पनि लगानीकर्ताहरु केही डराएका छन् । कम्युनिष्टको शासन हो भोलि आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका लगानीकर्ताहरुमा छ । कांग्रेस हुँदा जति विश्वासको वातावरण थियो त्यो वातावरण अहिले छैन । किनभने लगानीकर्ताहरुले कांग्रेसलाई जति विश्वास कम्युनिष्टलाई गर्दैनन् । निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छौं भन्ने, आतंककारी गतिविधि गर्ने कम्युनिष्टहरुको पृष्ठभूमि हो । त्यसैले लगानीकर्ताहरुले कम्युनिष्टलाई कम विश्वास गर्छन् । यद्यपि शुसाशन कायम राख्न सकेको खण्डमा कम्युनिष्टले पनि विश्वास आर्जन गर्न सक्छन् ।
नेपालका बैंकहरुले लगानी गरेका आयोजनाहरुलाई पनि विदेशी लगानी भनेर प्रचार गरिँदैछ नि ?
मूलकुरो के हो भने विदेशी लगानी भनेको इक्वीटी इन्भेष्टमेन्ट हो । नेपालको कानूनअनुसार चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत इक्वीटी हुनुपर्ने प्रावधान छ । बाँकी ७० प्रतिशत चाहीँ बैंकहरुबाट ऋण लिइन्छ । स्वदेशी वा विदेशी दुबै बैंकबाट ऋण लिन सकिन्छ । जस्तै, अहिले होङ्सी सिमेन्टले नेपाली बैंकसँगै ऋण लिएर उद्योग स्थापना गरेको छ । त्यसलाई अनौठो माुन्नु हुँदैन । र, अरुण तेस्रोले पनि नेपाली बैंकसँग ऋण लिने सम्झौता गरेको छ, यो पनि अस्वभाविक होइन ।
सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ, पूर्वअर्थमन्त्रीका रुपमा सरकारको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्रष्ट बहुमत प्राप्त गरेर गठन भएको सरकारले जनतालाई ठूलो आशा देखाएको थियो । तर, एक वर्षको अवधिमा जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ । अहिले म देशभरी घुमिरहेको छु । देशभरीका जनता सरकारसँग निराश भएको पाएको छु । आमसञ्चार माध्यमहरुमा पनि सरकारसँग जनता निराश भएका समाचारहरु धमाधम आइरहेका छन् ।
सुधार कस्तो भएको छ भनेर कठमाडौंका सडकको गति हेरे पुगिहाल्छ । कतिपय विकास हायोजनाहरु अलपत्र परेर बसेका छन् । सरकारमा बस्नेहरुको सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढेको छ । देशको विकासका लागि त उपभोग कसरी घटाउने, बचत कसरी बढाउने र त्यो बचतलाई कसरी लगानी गर्ने भन्नेतिर सोच्नुपर्ने हो ।
काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारमा बस्नेहरुले राजनीतिक संरक्षण गरेका छन् ।
क्रोनि क्यापिटलिज्म भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
कतिपय ठाउँमा क्रोनि क्यापिटलिज्म भएको छ । आफ्ना मान्छेले जति विगार गरेपनि संरक्षण गरेर राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राजनीकि संरक्षण पाएकै कारण काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाीह नहुनु यसको एउटा ज्वलन्त उदाहारण हो ।
यो सरकारसँग जनता निराश हुँदाको राजनीतिक फाइदा कांग्रेसलाई हुन्छ । कांग्रेसले कसरी यसको फाइदा लिन्छ त ?
यो भनेको कांग्रेसका लागि ठूलो अवसर हो । कांग्रेसले यसलाई अलिअलि क्यास गरिरहेको छ । देशैभर अहिले कम्युनिष्ट पार्टी छाडेर कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने लहर पनि चलिरहेको छ । तर, कांग्रेसले जति फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो, त्यति फाइदा भने लिन सकेको छैन । किनभने कांग्रेसका पनि आन्तरिक कमजोरीहरु छन्। व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु छन्, नेतृत्वका कमजोरीहरु छन् । गुटबन्दीबाट ग्रसित कांग्रेस छ, त्यसलाई सम्हालेर एकढिक्का भएर जान नसकेका कारणले यो अवसर लिन नसकेको हो ।
सरकारको अलोकप्रियताको फाइदा उठाउन कांग्रेसले कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?
हामी देशका विभिन्न ठाउँहरुमा घुमिरहेका छौं । कार्यकर्ताहरुलाई भेटिरहेका छौं । सरकारका गल्ती र कमीकमजोरीलाई जनतासमक्ष लगिरहेका छौं । पार्टीलाई सुधार गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौं । कांग्रेसको अहिलेको मूख्य रणनीति भनेको कांग्रेसकै सुधार हो । हामी केही साथीहरु त्यसमा लागिरहेका छौं । गुटबन्दीले कांग्रेस ग्रस्त छ । जसकारण गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।
गुटबन्दीको रोगले ग्रस्त भएको कांग्रेसले सुधारिएर फेरि मुलुकको नेतृत्व गर्नका लागि जनताको विश्वास जित्न सक्छ त ?
पहिलेभन्दा अहिले झन् गुटबन्दी बढेको छ । केन्द्रिय नेतृत्व नै आफ्नो गुट बलियो बनाउन लागेकोछ । यसले गुटबन्दी बढाएको हो । नेतृत्व नै सुध्रिनु पर्छ । मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु नेतृत्व भनेको गुटबन्दीभन्दा माथि उठेर सबैलाई सम्हाल्न सक्ने हुनुपर्छ । गुटबन्दी त्यागेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
सरकारमा बस्नेहरुले किन प्राप्त गर्नै नसकिने लक्ष्य लिन्छन् ?
सरकारमा बस्नेहरु यो गर्छु र उ गर्छु भन्नमै व्यस्त छन् । काम उन्मूख होइन, लक्ष्य उन्मूख छन् । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भनिरहनु भएको छ । यति ठूलो आर्थिक वृद्धिदर कसरी गर्ने भन्नेतिर उहाँहरुको ध्यान छैन । उहाँहरु खाली ठूल्ठूला आकाशै छुने खालका स्वप्नील लक्ष्यहरु राख्ने र भाषण गर्न सिपालु हुनुहुन्छ । तथ्यांकलाई नै प्रभाव पार्ने किसिमका उहाँहरुका गतिविधि छन् । हामीले सरकारमा हुँदा कहिल्यै यति प्रतिशत र उति प्रतिशत भनेर प्रचारबाजी गरेनौं । काममूखि भयौं ।
विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा यति प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर सरकारले अनुमान गर्ने हो । यति प्रतिशत गर्छु भनेर भन्ने होइन । आर्थिक लक्ष्य भनेको राजनीतिक रुपबाट राख्ने कुरा होइन । यो त विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतको सुझाबः आन्दोलन गरेर सेयर बजार बढ्दैन, घटेका बेला किन्नुस् (भिडियोसहित)
कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि अर्थतन्त्रले लय पक्रिसकेको छः अर्थमन्त्री खतिवडा
बैंकमा अख्तियार छिरे विवेकको निर्णय मर्छ, सीइओ लोभी नभए भ्रष्टाचार हुँदैन: भुवन दाहाल